Monnica T. Williams, Ph.D ဘွဲ့ကိုဖွင့်ပြီး OCD တွင်လိင်မှုဆိုင်ရာ ဦး တည်ချက်မတည်မငြိမ်မှုများ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
အတော်များများကစိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ရောဂါ၏ဤစဉျးပုံစံအားဖြင့်ရောထွေးနေကြသည်။ ဇန်နဝါရီလ 14, 2012 အားဖြင့်အပေါ် Published Monnica တီဝီလျံ, Ph.D ဘွဲ့ကို in ယဉ်ကျေးမှုအ Speaking
ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ် obsessive obsessive-compulsive ရောဂါအတွက် (SO-OCD) ၏ OCD လက္ခဏာအမျိုးအစားတွင်ထည့်သွင်းထားပါသည် လက်မခံနိုင် / မညီကြောင်းအတှေး နှင့်နေကြတယ် အလွန်စိတ်ပျက်စရာ။ တကယ်တော့အဲဒီစိုးရိမ်ပူပန်ဖို့အများကြီးဆင်းရဲခြင်းကိုမောင်း သတ်သေစဉ်းစားပါ။ တစ်ချိန်ကထို OCD ရောဂါလက္ခဏာများရှိသူများသည်အတင်းအကျပ်မလုပ်ခိုင်းသောကြောင့်ဤသို့ယူဆကြသည် -obsessional စင်ကြယ်သော"သို့မဟုတ်" စင်ကြယ်သော - o ။ " ဤရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းများသည်လျှို့ဝှက်ထားကောင်းဖြစ်နိုင်သော်လည်းစင်ကြယ်သောစွဲလမ်းသူများဟုခေါ်သည့်အမှန်တကယ်တွင်အတင်းအကျပ်ပြုမူမှုများရှိသည်ကိုယခုငါတို့သိပြီ။
ou ကအဲဒါကိုရပ်တန့်ဖို့တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ကြိုးစားမလား။ သင်အချိန်ယူပြီးတွက်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားပါ့မလား။ OCD ရှိသူများသည်သူတို့၏စိုးရိမ်မှုများကိုတုန့်ပြန်သောအားဖြင့်အတင်းအဓမ္မပြုလုပ်လေ့ရှိကြသည်။ ဤထုံးတမ်းများသည်နေ့တိုင်းနာရီများစွာကြာနိုင်သည်။ SO-OCD ရှိသူများအကြားမည်သည့်အတင်းအဓမ္မပြုကျင့်မှုများသည်အတိအကျကိုလေ့လာခြင်းမရှိသေးပါ။ သို့သော်မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သည့်အလုပ်များကအလားတူစိုးရိမ်မှုများရှိသူများသည်စိတ်ချရသောရှာဖွေမှု၊ အောက်ဖော်ပြပါအရာများသည် SO-OCD တွင်ဖော်ပြပြီးအမှန်တကယ်ရှိလူများထံမှနမူနာများကိုဖော်ပြသည်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထုံးတမ်း စိတ်ကိုနေရာယူကြောင်းအများကြီးကွဲပြားခြားနားသော, compulsive ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးစိတ်ပိုင်းရိုးရာဓလေ့တခုရဲ့ဥပမာစိတ်ပိုင်းဆန့်ကျင်ဘက်တွေနဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုသုံးသပ်ပြီးသူတစ်ဦးအထီးပါလိမ့်မယ် လိင် သူကအမျိုးသမီးများနှင့်အတူဖြစ်ခြင်းပျော်မွေ့ကြောင်းမိမိကိုမိမိစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်, အရှင်သည်သူ၏လိင်ကွဲအတည်ပြု။ ငါကုသခဲ့တဲ့ဖောက်သည်တစ်ယောက်ကလူနှစ်ယောက်နမ်းနေတာကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ သူကအပျက်သဘောဆောင်သောဗိုင်းရပ်စ်တုံ့ပြန်မှုကိုခံစားခဲ့ရလျှင်သူကသူဟာလိင်တူချစ်သူအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ကြောင်း (ခဏတာ) စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိခဲ့သည်။ အကယ်၍ တုံ့ပြန်မှုကိုသူမခံစားရပါကသူသည်လိုချင်သောရလဒ်မရရှိမှီအထိပုံရိပ်ကိုပြန်လုပ်ရသည်။ တစ်ခါတလေသူကရပ်လို့မရဘူးလို့သုံးနာရီကြာတယ်။
Reassurance ရှာကြံ မကြာခဏမလှူအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုမထားဘူးတဲ့ရိုးရာဓလေ့ဖြစ်ပါတယ်, သို့သော်လည်းအဆိုပါရောဂါ၏ပုံမှန်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ အာမခံအာမခံ, Self-အာမခံချက်, အဖြေကအင်တာနက်ရှာဖွေ, ဒါမှမဟုတ်တရားမဝင်အာမခံမှအခြားသူများအားဝန်ခံရန်လိုအပ်ကြောင်းဘို့အခြားသူတွေ (မကြာခဏမိတ်ဖက်) တောင်းဆိုနေတာအပါအဝင်ပုံစံအမျိုးမျိုးအတွက်ဆည်းကပ်နိုင်ပါတယ်။
လိင်တူဆက်ဆံခြင်းခံရသူဖြစ်မည်ကိုစိုးရိမ်သောအမျိုးသမီးတစ် ဦး က“ ငါ့ရည်းစားကငါသူ့ကိုအကြိမ်ကြိမ်မေးရင်ငါဟာဖြောင့်တယ်” လို့ပြောတယ်။ ၎င်းသည် OCD ဝေဒနာသည်နှင့်အတူနေထိုင်သူများအတွက်အထူးသဖြင့်စိုးရိမ်ဖွယ်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်၊ စိတ်ဖိစီးမှု.
Somatic စစ်ဆေးခြင်းကို မကျန်းမာခြင်း၏လက္ခဏာများကိုလူတစ်ယောက်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုစစ်ဆေးခြင်းအဖြစ်အကောင်းဆုံးဖော်ပြနိုင်သည်။ ဥပမာ၊ hypochondria ရှိသည့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်သူမဖျားနာခြင်းမရှိစေရန်အဖျားတက်ခြင်း၊ ရောဂါသို့မဟုတ်သွေးပေါင်မြင့်ခြင်းလက္ခဏာများကိုအမြဲတမ်းစစ်ဆေးနိုင်သည်။ အလားတူစွာ SO-OCD ရှိသူသည်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ရှင်များအနီးရှိလိင်ကွဲလိင်ဆက်ဆံမှုကိုသေချာစေရန်အနီးအနားရှိလူများသည်လိင်မှုနှိုးဆွမှုလက္ခဏာများကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်သူမဖြစ်လာခြင်းကိုသေချာစေရန်လိင်တူသူများနှင့်မနှောက်ယှက်ခြင်းလက္ခဏာများကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ လိင်တူချစ်သူ ဥပမာဆိုရသော် SO-OCD ရှိအမျိုးသားတစ် ဦး သည်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုကြည့်နိုင်သည် ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း သူကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုမကြိုက်တာသေချာတယ်။ လိင်တူချစ်သူတွေရဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုကြည့်တဲ့အခါသူကလိင်စိတ်နှိုးဆွတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုခုတွေ့ရင်သူကအနှောက်အယှက်မဖြစ်ခင်အထိဂရုမစိုက်ဘူး။
compulsive လွန်ကဲ Be နိုင်သလား
အချို့လူများကပင်နောက်ထပ်ထိုအ compulsive ယူပါ။ အောက်ပါဥပမာသည်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ valence (ဝီလျံ, 20) တိုင်းတာခြင်းတစ်နည်းလမ်းအဖြစ်ယောက်ျား၏ပုံရိပ်များမှ masturbates သူတစ်ဦး 2008 နှစ်အရွယ်အထီးကနေဖြစ်ပါတယ်။
ငါသွေးထွက်သံယိုတိုက်တွန်းချက်တွေနဲ့ရုန်းကန်နေရတယ်၊ အဲဒါကိုငါမခံရပ်နိုင်ဘူး။ “ မင်းလိုချင်တယ်” ဟုဆက်ပြောသည်၊ နောက်ဆုံးတွင်“ ကောင်းပြီ” ဟုငါပြောလိုက်သည် masturbate ငါမုန်းသောအရာတို့၌ကား၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အနည်းငယ်လုပ်ပေးနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်အကြောင်းအရာကိုမဟုတ်ဘဲလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်။ ထိုအခါမူကားကျွန်ုပ်သည်မိန်းကလေးတစ် ဦး အကြောင်းစဉ်းစားလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်ပြီးသွားပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ကြောင်းကိုသိသည်။
သို့သော်ကျွန်ုပ်၏အတွေးများကိုကျွန်ုပ်ခေါင်းထဲမှမည်သို့ထုတ်ယူရမည်နည်း။ ဤရွေ့ကားတိုက်တွန်းချက်များကိုမှန်ကန်ခံစားရသည်။ ကျွန်တော်ဒါမကြိုက်ပါဘူး ငါလုံးဝလိင်တူချစ်သူဖြစ်ချင်ကြဘူး။ ကျန်တဲ့ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ငါနေဖို့လိုလိမ့်မယ်။ ငါဒါကိုမလုပ်နိုင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ငါစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းပေမဲ့တစ်ခုခုကငါလိုချင်တာပဲဆိုတာဆက်ပြောနေတယ်။ OCD ဒါရှုပ်ထွေးသည်မဟုတ်လော
ငါတောင်မှစစ်ဆေးခြင်းကိုတစ်ပုံစံကဲ့သို့သောအခြားယောက်ျားနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံယောက်ျား၏အတော်ကြာရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီ။ သူတို့ကတောင်သူတို့သော်လည်းသူတို့တစ်တွေလိင်တူဆက်ဆံသူအတှေ့အကွုံကိုခံစားလိုလျှင်ထွက်ရှာတွေ့မှအပူတပြင်းများမှာ ကြောက်ရွံ့သေ​​ာသဘောသည် က။ သူတို့ကအားလုံးအတွက်အဓိပ်ပာယျကိုရှာဖွေရုန်းကန်အတိုင်းဤအတွေ့အကြုံကိုသာခံစားနေရသူပိုပြီးရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်စိတ်ပျက်စေသည်။
ရုံ Away နေပါ
ရှောငျးရှားခွငျး တစ်ဦးမလှူနှုန်း se စဉ်းစားပေမယ့်မည်သို့ပင်ဆိုစေထိုရောဂါကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန်မပေးပါ။ SO-OCD နှင့်အတူပြည်သူ့ထိုကဲ့သို့သောယင်းပါတီ, လိင်တူဆက်ဆံ themes များနှင့်အတူရုပ်ရှင်များ, ဒါမှမဟုတ် LBG အသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ရိပ်မိတောင်မှလူတွေကအဖြစ်မလိုချင်တဲ့အတှေး, ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအခြေအနေများမှရှောင်ရှားစေနိုင်သည်။
အောက်ပါငယ်ရွယ်သောသူသည်မိမိ SO-OCD များအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှုမှာကြိုးပမ်းမှုဖော်ပြသည်။ အဆိုပါကုထုံး avoidance မှဦးဆောင်တစ်ဦးကမှားဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအတွက်ရရှိလာတဲ့, OCD တစ်ဦးလက္ခဏာအဖြစ်စိုးရိမ်မှုတွေအသိအမှတ်ပြုရန်ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့် သတ်သေ အတှေးအ (ဝီလျံ, 2008) ။
တကယ့်ကိုဆိုးရွားတဲ့အတွေ့အကြုံပါ။ ငါယခုခဏ OCD နှင့်အတူရောဂါပါပြီ။ ငါမြင်နေတဲ့ကုထုံးကလူတစ်ယောက်နဲ့လူဖြစ်ဖို့ကြိုးစားသင့်တယ်၊ အဲဒါကကျွန်မကိုတကယ်စိတ်လှုပ်ရှားစေခဲ့တယ်၊ သူမပြောခဲ့တဲ့စကားကြောင့်ငါဟာငါးလကြာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေခဲ့တယ်။ အဆိုပါအတွေးများကိုပိုမိုအားကောင်းကြီးပွားသတည်း။ နောက်ဆုံးတော့အခန်းတစ်ခန်းတည်းမှာပဲလိင်တူချင်းတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတွေ့ရတာ၊ တီဗွီကြည့်တာ၊ သတင်းစာဖတ်တာ၊ ယောက်ျားအသံနဲ့တေးသီချင်းနားထောင်တာမျိုးမရှိခဲ့ဘူး။ အဲဒီအတွေ့အကြုံတွေအပြီးဒီလောကထဲမှာရှိနေဆဲဆိုတာကျွန်တော်အံ့သြမိတယ်။ ကုထုံးဆရာတွေကသူတို့လိုငါတို့လိုလူတွေပြောနေတာကိုသတိထားသင့်တယ်။
အထက်ပါဥပမာတွင်လူနာ၏စိတ်ဆင်းရဲမှုသည်ကုထုံး၏လွဲမှားသောကြား ၀ င်မှုကြောင့်မဟုတ်သော်လည်း SO-OCD ဖြစ်နိုင်ချေကိုဂရုတစိုက်အာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းပြသသည်။
နောက်တစ်ခု: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရှေ့တိုင်းဆန် theme OCD ၏အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကုသရေး
အကြောင်းကိုဤအရေးကြီးသောစစ်တမ်းကိုယူ OCD နှင့်နီးစပ်. ပိုမိုသိရှိရန်:
Williams ဟာ, အမ် (2008) ။ လိင်တူဆက်ဆံခြင်းတော့ပူပန်: OCD ၏တစ်ဦးကနားလည်မှုလွဲ Form ကို။ LV Sebeki (Ed), ဦးစီး-Edge ကနျြးမာရေးအတွက် ပညာရေး ကိစ္စများ, Nova ထုတ်ဝေ။
ဝီလျံ, MT, Crozier, အမ်, လုပ်ပိုင်ခွင့်, ကို MB (2011) ။ Exposure နှင့်ထုံးတမ်းကာကွယ်တားဆီးရေးသုံးပြီး obsessive-compulsive Disorder အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရှေ့တိုင်းဆန် obsessive ၏ဆက်ဆံမှု။ လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာရေး, 10, 53-66 ။
ဝီလျံ, MT, Farris, စင်ကာပူဒေါ်လာ, Turkheimer, အီး, Pinto, အေ, Ozanick, K. , Franklin, ME, Simpson, HB, Liebowitz, အမ်, Foa, eb (2011) ။ obsessive-compulsive Disorder အတွက်သန့်စင်သော Obsessional အမျိုးအစားများ၏သွန်သင်ချက်အမှား။ စီးပွားပျက်ကပ် & စိုးရိမ်စိတ်, 28 (6), 495-500 ။